Hirar mawjadaha hirarka: waa maxay, sifooyinka iyo sida ay u shaqeyso | Cusbooneysiinta Cagaaran
Waan ognahay inay jiraan noocyo kala duwan oo tamar dib loo cusboonaysiin karo. Laga soo bilaabo tamarta hirarka iyo tamarta kuleylka, ka tamarta qulqulka. Waxaa loo yaqaanaa beddelka tamarta kuleylka iyo badda. Waa nooc ka mid ah tamarta la cusboonaysiin karo oo mabda'a hawlgalkiisu uu ku saleysan yahay farqiga u dhexeeya heerkulka u dhexeeya biyaha dhaadheer iyo kuwa ugu dhow dusha sare.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa dhammaan astaamaha, asalka iyo muhiimadda tamarta qulqulka.
2 Hawlgalka tamarta qulqulaya
3 Aagagga tamarta hirarka
4 Hordhaca suuqa
Waa nooc ka mid ah tamarta la cusboonaysiin karo oo ku saleysan farqiga u dhexeeya heerkulka ka jira biyaha qoto dheer iyo kuwa ugu dhow dusha sare. Caadi ahaan, biyaha qoto dheer waxay u muuqdaan inay leeyihiin heer-kul hoose oo biyaha ku dhow dusha ayaa diirran. Sidan oo kale, iyada oo ay ku kala duwan yihiin heerkulkan, mishiinka kuleylka ayaa dhaqaajin kara soona saari kara shaqo waxtar leh. Iyada oo loo marayo shaqadan dhaqdhaqaaqa mishiinka kuleylka, koronto ayaa lagu soo saaraa hab nadiif ah oo dib loo cusboonaysiin karo.
Faa'iidada ay tamarta dabayshu leedahay tan kale waa inay shaqeyn karto 24 saac maalintii. Kuma xirna dabaysha ama xaaladaha qorraxda. Mashiinka kuleylka ee ay tahay inaan ku aragno tamartaan farqiga u dhexeeya heerkulku waa farsamooyin meerto ah. Farsamooyinka noocan oo kale ah waxay ka helaan kuleylka ilaha kulul si ay u soo saaraan shaqo saafi ah oo ay uga saaraan kuleylka kuleylka kuleylka hooseeya. Markay sii weynaato farqiga heerkulka ee u dhexeeya lakabka ugu sarreeya iyo lakabka biyaha ugu hooseeya, ayaa sii weynaanaya isha laga beddelayo tamarta.
Hawlgalka tamarta qulqulaya
Waxa maanta ka dhacaya shidaalka caadiga ah ee shidaalka ayaa ah inay aad qaali u yihiin oo aan la heli karin. Sidaa darteed, dadaallo badan ayaa la sameynayaa si loo awoodo hagaajinta waxtarka kuleylka si aad ugu shaqeyn karto xoogaa heerkulka heerkulka yar. Farsamo kale waxaa ka mid ah adeegsiga wareegyo isku dhafan iyo isukeenid kuwaas oo awood u leh inay u beddelaan qayb aad u badan oo ka mid ah tamarta la gelinayo shaqo waxtar leh iyo, ka dib, koronto.
Faa'iidada beddelka tamarta kuleylka ee badda waa inay ku jiri karto ilo tamar jaban oo leh helitaan aan xadidneyn. Si ka duwan waxa ku dhaca tamarta dabaysha ama tamarta qorraxda, tamarta hirarka ayaa had iyo jeer la heli karaa. Sidan oo kale, waxay noqon laheyd suurto gal in la helo mashiinno kaamerada soo jiidasho leh oo ka shaqeyn kara inta u dhexeysa ilaha kuleylka ee leh kala duwanaanta heerkulka oo ballaaran oo awood u leh inay soo saaraan koronto.
Qalabka loo isticmaalo beddelka tamarta kuleylka ee badda waa mashiinka kuleylka. Mashiinka la dhajiyay ayaa loo dhisay inuu awood u yeesho inuu ka dhex shaqeeyo heer kul wanaagsan iyo heer kul hoose. Heerkulka ugu dhow dusha sare ee badda ayaa ka kulul kan moolka. Haddii aan ku tababbarayno, beddelidda tamarta si ay faa'iido u yeelato, waa inuu jiraa kala duwanaansho heerkul ah oo u dhexeeya kan ugu quruxda badan dusha iyo kan qoto dheer ee ku saabsan 20 digrii.
Si loo gaaro kala duwanaanshahan heer kul, mid waa inuu raadsadaa gobollo juqraafiyeed oo ka mid ah dusha badda oo ay qorraxda kululeeyaan iyo halkaasoo celceliska heer kulku yahay illaa 30 digrii. Sidan oo kale, waxaan dammaanad ka qaadaynaa in heerkulka qoto dheer ee 900 mitir uu noqon doono 5 darajo.
Aagagga tamarta hirarka
Waxaan eegeynaa waa kuwan meelaha ugu badan ee tamarta hirarka laga soo saari karo. Meelaha kuleylaha kuleylka ah waxay u muuqdaan inay leeyihiin kala duwanaansho weyn oo heerkulka badda ah oo ah shaqeyn qoto dheer. Aynu aragno waxa heer kulku yahay shaqaynta dusha sare:
Heerkulka dusha: waxay badanaa ku dhacdaa qiyaastii 200 mitir qaro weyn waxayna u shaqeysaa sidii kuleyl aruuriye. Halkan heerkulku wuxuu noqdaa ku dhowaad 25-30 darajo.
Warbaahinta: waxay ku taal meel u dhexeysa 200-400 mitir oo qoto dheer waxayna leedahay kala duwanaansho heerkul deg deg ah Kala duwanaanta heerkulka degdegga ah waxay u adeegtaa sidii caqabad kuleyl ah oo u dhexeeya lakabyada moolka iyo dusha sare.
Qoto dheer: heerkulka ayaa hoos u dhacaya oo kaliya illaa uu ka gaaro 4 darajo 1000 mitir iyo 2 digrii oo mitir 5000 ah.
Badaha kulaylaha waxaa ku kala duwan farqiga u dhexeeya dusha sare iyo qoto dheer 1000 mitir. Sidii aan horay u soo sheegnayba, si dhaqaale ahaan looga dhigo mid hufan Nidaamkani wuxuu u baahan doonaa kala duwanaanshaha amarka 20 darajo. Kala duwanaanshahan heerkulka, tamar ayaa loo isticmaali karaa si loo wado mishiinka kuleylka. Gobolladaan waxay ka jiraan oo keliya latitude u dhow Equator, oo ku yaal gobollada Badweynta Baasifigga. Waxa kale oo jira meelo kaamil ah tan, sida bariga iyo galbeedka Bartamaha Ameerika iyo meelaha fog fog ee xeebta koonfureed ee Mareykanka iyo bariga Florida.
Illaa iyo hadda, ku dhowaad dhammaan soo-jeedimaha ka jira adduunka ee ku saabsan tamarta mawjadaha hirarka ma aysan sameynin boodbooda. Waana inaysan weli jirin nooc tijaabo ah oo dhir ganacsi sida tamarta dabaysha ah. Kharashaadku aad bay u badan yihiin oo si fiican looma maarayn karo weli. Kaliya waa inaad ka fikirto in fiilooyinka badda aada ay mas'uul ka noqon doonaan fulinta tamarta ilaa berriga. Waa in lagu xisaabtamo in baddu tahay deegaan wax gumaada oo laga yaabo inay sii xumaato fiilooyinka si joogto ah.
Waxaa jira shirkado badan oo diiradda saaraya horumarinta xalal cusub oo hufan inaad awood u yeelato inaad ka faa'iideysato awooda ay leedahay tamarta hirarka. Ma jiraan wax kale oo laga fikiro taas oo noqon karta tamar aan xad lahayn oo la cusboonaysiin karo. Kaliya waa fekerka ku saabsan sida looga dhigi karo tamarta noocan ah mid wax ku ool ah oo dhaqaale ahaan faa'iido leh. Tamar aan wasakheynin, xadidan oo dib loo cusbooneysiin karo waqti kadib. Kaliya ka fikir.
Sidaad u aragto, tamarta mawjadaha hirarka waa mid ka mid ah tamarta la cusboonaysiin karo ee ku jira horumarka laakiin leh awood badan oo mustaqbalka tamar nadiif ah. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan tamarta qulqulaya iyo sida ay u shaqeyso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta daadka